Ebumnuche 7 iji mejuputa Nsuso oku na nchịkọta | Martech Zone
Onye nleta na-ahụta saịtị gị site na iji isiokwu nkịtị na ụlọ ọrụ gị. Ha na-abanye n'ụlọ gị site na ama ha, mepee ibe obibi, wee chọta nọmba ekwentị azụmahịa gị ngwa ngwa. Na ọnụ ọgụgụ kwesịrị ekwesị njikọ ịkpọ oku na-akpaghị aka mgbe ha pịrị nọmba ekwentị. Ihe olile anya na-agwa ndi otu inbound gị nwere ikike mechiri ha ngwa ngwa.
O di nwute na, ọ bụghị oké ozi ọma. Nọmba ekwentị gị bụ ike-nzuzo na ntanetị weebụ gị. N'ihi ya, ị maghị ebe ọbịa si na mkpọsa ahụ, ọ bụrụ na ọ bụla, ịkọwa ire ere emechiri emechi. Ọ bụrụ n ’ị mejuputara azịza ọkpụkpọ oku, ị ga - enwe akụkọ dị iche. Onye ọrụ ahụ ga - abata na saịtị gị ma a ga - emepụta nọmba ekwentị ọhụrụ nke ọma dabere na isiokwu dị na mkpọsa ọchụchọ ahụ. Onye ahu gha akpo ya na onuogugu, oku ahu gha edenyere na oku nchịkọta, na ire ere gaara ekwuworị nke ọma na isiokwu na ọchụchọ ọchụchọ.
Ọ bụ ezie na nke a bụ nhọrọ okomoko maka ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ ọtụtụ afọ gara aga, kpọọ nsuso na nchịkọta bụzi ọnụ ahịa dị ọnụ ala. Mejupụta ọnụ ahịa ya na omume smartphone - nke na-arị elu - ma oge eruola ka ị were teknụzụ a! Ekwetaghị m? Lee 7 ọnụ ọgụgụ dị oke egwu nke na-akwado nkwado nke nsuso oku:
Nchọpụta ọchụchọ ekwentị A na-eme atụmatụ ịmepụta oku 73 ijeri azụmahịa na 2018
61% nke ndị na-aza ajụjụ kwuru Pịa-ịkpọ oku bụ igodo na oge ịzụ ahịa ịzụ ahịa
70% nke ndị na-enyocha ekwentị na-eji pịa pịa iji jikọọ na azụmahịa ozugbo search results
79% nke ndị ọrụ smartphone na-eji nchọta mpaghara, 89% otu ugboro kwa izu, 58% ọ dịkarịa ala kwa ụbọchị
57% nke ndị mmadụ na-akpọ maka na ha chọrọ ịgwa a ezigbo mmadụ
Ulo oru anatawo 19% ebili na oku oku afọ karịrị afọ
Inbound ekwentị oku tọghatara Oge 10-15 karịa ntanetị weebụ
As Kpọọ oku tinye ya, atụmanya gị adịlarị na ekwentị. Ajụjụ bụ ma ha na-akpọ gị ma ọ bụ na ha anaghị akpọ ya.
Ngosi: Abụ m mmekọ Kpọọ oku
Tags: nyocha nyocha okuKpọọ nchịkọtakpọọ okporo ígwèoku na-esochioku
Mgbe ị gụchara isiokwu a, ihe niile na-aghọ nke doro anya:) Daalụ maka isiokwu ahụ. Ọnụ ọgụgụ ndị ahụ na-adọrọ mmasị, na ọbụna ma ọ bụrụ na ị maghị ihe ọ bụla gbasara nsochi oku, ọ na-eme ka ị chee echiche banyere uru ya. Callrail yiri ka ọ bụ nnukwu mkpebi, yana enwere ndị na-enye ndị ọzọ dị ka Avidtrack, Ringostat, Dialogtech.